Nuxurka kulan dhex maray Madaxweynaha la doortay iyo Madaxweynaha xilka ka degaya | Somaliland.Org
Nuxurka kulan dhex maray Madaxweynaha la doortay iyo Madaxweynaha xilka ka degaya
July 23, 2010	Hargaysa, (Somaliland.org)-Madaxweynaha la doortay Md. Axmed Maxmed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Madaxweynaha xilka ka degaya Md. Daahir Rayaale Kaahin ayaa shalay wada yeeshay kulan saacado qaatay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta Madaxtooyada.
Warsaxaafadeedkan oo uu ku saxeexnaa Af-hayeenka Madaxtooyada Siciid Cadaani Mooge waxa lagu sheegay inay labada Madaxweyne ka wada hadleen habsami u socodka qaban qaabada hawsha xil-wareejinta, waxa kale oo sida war-saxaafadeedka ku cad Madaxweyenaha xilka ka degaya Md. Daahir Rayaale uu tilmaamay inuu si daacadda ah ula shaqayn doono Madaxweynaha la doortay.
War-saxaafadeedkaasina wuxuu u dhignaa sidan:
“Madaxweynaha Cusub ee la doortay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo Madaxweynaha xilka Wareejinaya Mudane Daahir Rayaale Kaahin ayaa maanta kulan muddo labba Saacadood ah qaatay ku yeeshay Qasriga Madaxtooyada.
Madaxweynaha la doortay ee xilka la wareegi doona Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sillaanyo waxa uu sheegay in mudane Daahir Rayaale Kaahin uu ka dhageystay talooyin badan oo wax ku ool ah dhinacyo kala duwana taabanaya.
Mudane Axmed Silaanyo waxa uu intaa raaciyey in uu ku qanacsan yahay sida habsamida ah ee ay u socoto qaban qaabada xil wareejinta ay isku raacsanyihiin in la digtoonaado wax alaale wixii khalkhal galin kara xil wareejinta oo hadda si habsami ah u socoto, taas oo cabsi iyo welwelba ku abuuri karta shacbiga Somaliland.
Sidaa si leeg madaxweynaha xilka wareejinaya Mudane Daahir Rayaale Kaahin, waxaa isna uu sheegay in Madaxweynaha Cusub ee la doortay uu siiyey talooyin badan oo danta dalka khuseeya maadaama uu muddo dheer xilka soo hayey waayo aragnimana uu u leeyahay.
Waxa kale oo intaa uu raaciyey Mudane Daahir Rayaale Kaahin in isaga iyo Madaxweynaha la doortay si fiican oo daacadnimo ah u wada shaqayn doonaan mustaqbalka, islamarkaana sidii uu hore u balan qaaday inuu si sharaf iyo xishmad leh uu xilka ugu wareejin doono marka la gaadho wakhtiga lagu balamay”
Previous PostFuritaankii Carwada caalamiga ah ee bugaagta Hargaysa iyo muuqaalkii madashaNext PostBayaankii Hoggaanka Tolka ee Gatineau	Blog